Sidee ku cadaadisaa Videos la Mac Finder Fast iyo si fudud e
Finder Mac waa qalbiga aad Mac. Waxay bixisaa helitaanka macluumaadka iyo guud ahaan maamushaa sida aad la Mac xiriiraan. Haddii aad u beddelatid Mac ka Windows, waxaad ogaan doontaa in Finder Mac waa la mid Windows Explorer, qalab sahlan in aad ku siinaysaa in ay helaan barnaamijyo kala duwan oo computer. Finder Mac waa ka roon tahay oo kaliya web browser file computer ah, in kastoo. Waa Road Map barnaamijka file computer aad Mac ee ah. Kale badan sahaminta aad Mac, waxa aad u waxtar leh in riixo of videos, iyo halkan waxaan ku siin doonaa tallaabo faahfaahsan by habka talaabo ah sida aad cadaadin videos la isticmaalayo qalab this.
Video riixo waxaa loola jeedaa in la yareeyo caddadka oo ku saabsan videos. Tani waxa ay sal ahaan gaari ay yaraaneyso oo ay ka saareen warbixin soo noqnoqda ka. Dadka u baahan video riixo tan ugu videos qaataan badan oo boos kor drive adag, iyo files video badan oo xaqiiqo ah waa dhiba iyo walaac in ay wadaagaan. Mararka qaarkood waxaad u baahan doontaa in ay alaabahooda videos foomamka fududee u qaybsiga, ku xirato video for YouTube, sarrifka in aad qalab ama email dadka kale; iyo tan ficil ahaan waa sababta aad u baahan doontaa Mac Finder.
Sida loo isticmaalo finder Mac in video riixo
Tallaabada 1. Daahfurka Mac Finder
Geedi socodka video riixo Mac Finder waa hab sahlan oo fudud oo aad ku kalsoonaan kartaa wakhti kasta. Inkasta oo aanay laga yaabo ikhtiyaarka ugu fiican, Yuru waa mid ka mid ah gaar ahaan marka waa inuusan ahaan hawlaha video riixo. Si kastaba ha ahaatee waxa lagama maarmaan noqon lahayd si aad u ogaado in Mac Finder soo dhaadacday doono oo kaliya video files qaab .MOV ah. First of dhan, waxaa lagaa doonayaa inaad u furo Finder Mac ah si aad u heli interface user. Your Mac si kastaba ha ahaatee waa in ay maamulaan on X 10.7 nidaamka qalliinka ama version dambe. Waxaad si fudud u riixi kartaa icon raadiyayaal ku desktop ah in la furo suuqa kala cusub ama si fudud u isticmaali tab amarka ka dibna isticmaali amarka-N inay sidaas oo kale sameeyaan.
Tallaabada 2. Meel ku file video
Kadib markii ay Finder Mac ah, waxaad u baahan doontaa in ay helaan video ah in aad rabto in aad cadaadin. Tani waxaa lagu sameyn karaa iyadoo la isticmaalayo isha ku saabsan qaybta ugu bidix ee suuqa aad Mac finder ee, halkaas oo aad ka dhirtuba doonaa iyada oo fayl ah mid mid ilaa aad ka hesho in file video aad u baahan tahay si loogu badalo ka. Sidoo kale, waxaad si fudud u isticmaali kartaa doorasho raadinta, laga helay dhankiisii ​​midig sare; halkaas oo kaliya aad u baahan inay ka raadi magac video files oo si toos ah iyo si fudud ku yaalla doonaa soo bandhigay in maadada aad Mac Finder ah.
Tallaabada 3. Dooro file encode
Ka dib marka aad ku yaal aad file video, gacanta + guji galka si ay u soo bandhigaan fursadaha menu. Waxaad la siin doonaa tiro ka mid ah falalka waxaad codsan kartaa file ah laga bilaabo furan, guuraan qashinka ka mid ah kuwa kale. Hel ka "encode xulay video files" doorasho, taasoo qayb ka hooseysa inta badan menu. Control + Guji faylka dooro> Encode soo xulay Video Files
Tallaabada 4. hawadda ee interface
Waxaad la siin doonaa "encode warbaahinta" daaqad meesha aad ku fadhiisin doono fursadaha of video wax soo saarka. Waxaad heli doontaa dhawr foom oo wax soo saarka in aad ka heli karto. Tusaale ahaan waxaad dooran kartaa ka 1080p, 480p ama 720p. Sidoo kale, waxa kale oo aad fursad u haysataa ee u beddelaya audio kaliya ama ProRes Apple. Si tan loo sameeyo, la beddelo fursadaha dhibic ka hoos menu laga helay fursado goobaha. Markaas waxaad u tagtaa oo fursad u socda meesha aad ka heli in ay doortaan nooca tayada aad u baahan tahay in aad wax soo saarka video. Dooro ka tayada sare ama fursadaha tayo hoose; Si kastaba ha ahaatee doonaa labadooduba leeyihiin saamayn kala duwan aad video on eego waafaqsan sidoo kale playability.
Qaab aad u soo xulay iyo xallinta lagu soo bandhigi doonaa daaqadan aad. Heerka xogta ayaa sidoo kale waafaqsan videos la halkan sidoo bandhigi doonaa. Ogsoonow in 480p ah, 720p iyo 1080p, ay u baahan doonaan riixo H.264 taas oo ah mid aad u ciriiri iyo tan xaqiiqo ah bixisaa ugu yaraan video le'eg. Sameynta qaraarkii ka yar video caawin kara yareeyo xajmiga file. Sidoo kale xusuusnow in this video hawadda free waa aalad fudud oo kaliya qaniinaa videos la beddelo xallinta video .MOV ah.
Tallaabada 5. Destination Set
Waxa kale oo aad si fudud u helo kartaa video cusub ee doorashada folder halka aad doorbidid. Ka ikhtiyaar caga meesha aad sidoo kale dooran kartaa inaad ku badbaadin file cusub oo hal goob ah sida video asalka ama doorato meel kale u beddel. Si aad u dhawrtaan galka isla, ee "la mid ah sida file il" sanduuq sax. Waxa kale oo aad go'aan ka gaarto haddii aad u baahan tahay file asalka dambe ka dib markii riixo this. Dooro in ay tirtirto ama ilaaliyaan file oo haya ama sax ah "Delete il files ka dib markii baaraandegidda" ama aan sax isku mid.
Ka dib markii aad ka dhigay goobaha aad doorbiday, oo aad si raaxo leh fursadaha video saarka set, riix sii.
Tallaabada 6. Hab-riixo
Ka dib markii gujinaya ok, aad file si toos ah u siin doonaan faylka wax soo saarka ilaha aad doorato galay. Hawlaha qaab beddelidda wuxuu qaataa daqiiqado yar ku xiran tahay dhererka ama size of file asalka. Waxaad la ogaysiinayaa ka riixo guul iyo kiis kasta oo ay diido, fariin digniin ah ku soo wargelin doonaa. Qaar ka mid ah qodobada video in saameyn ku yeelan doontaa heerka xawaaraha iyo habkan waxaa ka mid ah:
1. Pixel aragti: The weyn cabbir pixel ah, geeddi-socodka gaabis ah tan iyo markii ay taasi keeni doontaa in video ah oo aad u balaaran. HD waa run ahaantii ka weyn SD tan iyo markii ay ka kooban pixels sare.
2. Video size: Tani waa qaybta ugu cad waxaad ka heli kartaa clips movie oo kartaa dib-u-size kororka qaar ka mid ah iyo in ujeedada sababta hubka dabiiciga qabaa sida ugu wanaagsan oo degdeg ah si ay alaabahooda videos clip waa in la gooyaa waa clip duration. Si kastaba ha ahaatee, waa adag tahay in la ilaaliyo isku halaynta iyo tayada waqti isku mid ah marka la gooyaa muddada.
3. Tayada haya'ad: Guud ahaan, mid ka mid ma hoos u dhici doonto bixinta sare oo tayo sarre leh marka daawashada filimka, gaar ahaan filimada 3D. Si kastaba ha ahaatee, waxa ay sidoo kale u ballaadhiyo kartaa video clips iyaga qaadato waqti dheer ku cadaadisaa.
4. Heerka Audio: Marka aan ka hadlo clips filim, waxaa jira ugu yaraan 2 qaybood - movie iyo dhawaaqa. Sidaa darteed, tayada codka sidoo kale saameyn ku yeelan kara oo dhan size file filimka. Heerka muunad Audio waa element ugu muhiimsan, kaas oo loo qaybin karaa ilaa 3 fasalada sida 22,05 Khz, 44,1 Khz iyo 48 kHz. Fasalka Sare gaaro natiijo fiican dhawaaqa, taas oo macnaheedu yahay size movie weyn.
5. Bitrate Streaming: Qaado dhexena iyo RMVB tusaale ahaan, oo labadoodaba waxaa ka waxaa loogu talagalay by System dhabta ah, kaas oo ka ciyaari kara daafaca dhexe ee RealPlayer. Khadka dhexena waxa uu fududeeyaa loading bitrate joogto ah, kaas oo abuuri kara socodka oo quruxsan Hubi in ka yar isticmaalka xogta kala iibsiga xadiday. Si kastaba ha ahaatee, RMVB ku xiran kala duwan loading bitrate ilaaliyaa bitrates dheeraad ah oo dhaq khaldaan sida fulinteeda iyo qoob ka ciyaarka, coasters iyo dagaal, taas oo koriyo fiican daawashada saameyn. Waa maxay dheeraad ah, waa ay ka badan is ka badan dhexena.
6. codec: habab kala duwan si ay u keyframe la codecs kala duwan sidoo kale waxay saameyn kartaa size filim, halkii ay taageero oo casri ah oo isku maran, samaynta u badan tahay in entropy taageero si aad u hesho waayo-aragnimo movie fiican.
Marka la isticmaalayo qalab loogu cadaadiska video, samir in compressing clips filim aad, sababtoo ah size waaweyn iyo clips filim tayo sare leh qaadan karaa daqiiqado ama xitaa saacado ka in la Tifaftirayaasha.
Mac Finder waa aalad riixo fiican oo fudud oo waa fududahay in la isticmaalo iyo waxa ku jira interfaces user saaxiibtinimo. Waa qalab hidi Mac oo ay sabab u tahay is-dhexgalka Mac, waxay bixisaa muggeed oo doorar kale, kuwaas oo intooda badan isticmaala badan oo aan xitaa ka war. Si kastaba ha ahaatee, la qaabeynta habboon, finder Mac cadayn doono inuu yahay in ka badan qalab caadi ah.
Marka loo isticmaalo qaab beddelidda, video, waxa ay bixisaa fursado dadka isticmaala si loo badbaadiyo files cusub ee fayl ay doorashada, halkaas oo folder default waa meesha file ee asalka ahaa. Ka dib markii riixo waxaad dooran kartaa waxa dhici in ay file asalka, sidoo kale waxa ay u ilaaliyaan ama u tirtirto. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa Muujin doorasho si loo muujiyo oo dhan videos la Tifaftirayaasha. Tani waxay noqon kartaa mid waxtar leh marka macluumaadka ku jira liiska ma laha horyaal aad Sugi, ama ugu yaraan horyaal in kaliya waa sida wixii loo Sugi.
Marka aad door bideen inay isticmaalaan Mac finder video qalabka riixo isagoo garanaya qaab clip, heerka iyo heerka xoogaa in saamaynta size ee movie dulfuulan, waxa ay noqon doontaa wax badan kuu fududaanaysaa in aad dooro ugu wanaagsan ee goobaha riixo movie. Shuruudaha goob kala duwan oo ka cabir doorbiday natiijada, qaab computer, Mala'igtu cadaadis gaar ah oo dhinacyo kale oo badan.
Faa'iidooyinka isticmaalaya barnaamijkan waa badan oo kala duwan. Guud ahaan waxa aad u haboon si ay cadaadin video clips si ay ciyaari karaa qalabka ku haboon, sababtoo ah presets wanaajiyey waxaa lagu dhisay nidaamka. Sidoo kale waxaad tahay inay awoodaan inay u astaysto aad filim ka hor riixo ma illoobo in ay bixisaa xawaare riixo si dhakhso ah tan waa barnaamij isku dhafan ee OS Mac ah.
> Resource > Mac > Sidee ku cadaadisaa Videos la Mac Finder Fast iyo si fudud